के हुँदैछ दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था, सरकारको सहुलियत कहाँ पुग्यो ? access_timeचैत २३, २०७६
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनका कारण सर्वसाधारणको जनजीवन प्रभावित हुन पुगेको छ । लकडाउनको करिब दुई साता बित्दा नबित्दै बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालिसकेको छ । विशेषगरी दैनिक उपभोग्य वस्...
‘कोरोना समस्या मात्र होइन समाज परिवर्तनको सुनौलो अवसर पनि हो’ access_timeचैत २२, २०७६
काठमाडौँ । एनएमबी बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) हुन् सुनिल केसी । केसीले राष्ट्रका प्रमुख ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कहरु मध्येको एक बृहत् बैङ्क एनएमबीको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । यद्यपि अहिलेको विषम परिस्थितिमा समेत उनले घरमै बसेर बैङ्कका सम्पूर्ण कार्यभार पूर...
घरबेटीहरु घरभाडा छुट दिन तयार होलान् त ? access_timeचैत १८, २०७६
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैसन सक्ने जोखिमलाई मध्यनगर गर्दै लकडाउन घोषणा गरेको सरकारले सर्वसाधारणमा परेको आर्थिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भन्दै आइतबार एकमुष्ट राहत प्याकेज सार्वजनिक ग¥यो । कोरोनाको सन्त्रास र लकडाउन पछि पहि...
लकडाउनमा पनि एयर डाइनेष्टिको हेलिकप्टर आकाशमा access_timeचैत १२, २०७६
काठमाडौं । कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण मुलुक ठप्प छ । मानिसहरु घरभित्रै बसेका छन् भने, सडक चोक, गल्ली, हाट बजार सबै सुनसान छ । सरकारले गत सोमबार चैत ११ गते देखि १८ गतेसम्म एक हप्ताका लागि...
लकडाउनः अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नरोकिने, आवश्यक परे सरकारले नै घरघरमा डेलिभर गर्ने access_timeचैत ११, २०७६
काठमाडौं । विश्व महामारीको रुपमा फैलिको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा संयमितताका लागि सरकारले पूर्णतः देश लकडाउन गरेको छ । चैत्र ११ देखि १८ गतेसम्मका लागि गरिएको लकडाउनका कारण मङ्गलबार विहान देखिनै सहरका सडक, चोक गल्ली सबै सुनसान छ । कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिन नद...
अतिरिक्त आउटलेटबाट बिक्री सुरु गरेपछि ग्यास आपूर्तिमा सहज access_timeचैत १०, २०७६
काठमाडौं । केही दिनदेखि बजारमा ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या निगमको सक्रियतामा सहज हुँदै गएको छ । नेपाल आयाल निगमले साविकको तुलनामा ग्यासको आपूर्ति वृद्धि गर्दै अतिरिक्त आउटलेट रिटेल काउन्टरहरुबाट समेत बिक्री वितरण गर्न थालेपछि बजारमा ग्यासको आपूर्ति सहज भएको हो । ...
‘खर्च २७ हजार, कमाइ ८ हजार !’ access_timeचैत ५, २०७६
काठमाडौँ । कोरोनाभाइरसको महामारीको ‘चेन इफेक्ट’मा यतिखेर यातायात क्षेत्र परेको छ । विश्वमा कोरोनाभाइरसको सन्त्रासकाबीच पर्यटन, वैदेशिक रोजगारीको आगमन–प्रत्यागमनसँगै देश भित्रको चहल–पहल समेत रोकिदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा यातायात क्षेत्र परेको हो...
सरकारी निर्णयपछि टुटल र पठाओको भविष्य : अब फेरि राइड कि साइड ? access_timeफागुन २८, २०७६
काठमाडौं । बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको ‘राइड सेयरिङ’ टुटल र पठाओको विषयमा फेरि विवाद उठेको छ । मंगलबार यातायात व्यवस्थापन विभागले टुटल र पठाओमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी सूचना जारी गरेसँगै टुटल र पठाओको मुद्दा फेरि एक पटक सतहमा आएको हो । सूचना...
कोरोनाको विश्वमा रिप्पल इफेक्ट : पर्यटन, व्यापारदेखि रेमिटेन्ससम्म access_timeफागुन २८, २०७६
काठमाडौँ । विश्वमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको प्रभाव यतिखेर विश्व अर्थतन्त्रमा परेको छ । कोरोना प्रभावित मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभावका बीच अन्य मुलुकहरुमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव सुरु भएको छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, आयात निर्यात त...
कृत्रिम अभाव गर्नेलाई तत्काल ‘एक्सन’ ! access_timeफागुन २३, २०७६
काठमाडौँ । कोरोनाभाइरसको सन्त्रासबीच बजारमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि आवश्यक माक्स, औषधि, लत्ताकपडाको कृत्रिम अभाव हुन थालेको भन्ने हल्ला चलेको छ । यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हल्लाका पछि नलाग्न आम सर्वसाधारणमा अपिल गरेक...
अब सांसद र मन्त्रीको खल्तीबाट कुनै पनि परियोजना नआउने access_timeफागुन २०, २०७६
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सकिन अब करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ । संविधानतः नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते भित्र ल्याइसक्नुपर्छ । बजेट वक्तव्यको दिन गन्तीले पनि अबको बढीमा तीन महिना भित्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तयार गरिसक्नुपर्छ । अहिले यही बज...
ठेकेदारलाई दिएको म्याद थपको अन्तिम समय सकियो, मन्त्रालयमा फाइलको चाङ access_timeफागुन १६, २०७६
काठमाडौँ । यतिखेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालमा आयोजनाहरूको म्याद थपका फाइलको चाङ लागेको छ । देशभर सञ्चालित म्याद सकिएका, समय गुज्रिएका र समस्या परेका रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद थपको फाइल मन्त्रालयमा आएको हो । अहिले मन्त्रालयहरूलाई ठेक्का पट्टा...
पर्यटकसँगै ‘प्रकोप’ भित्रिए के गर्ने ? access_timeफागुन १२, २०७६
काठमाडौं । चीनको हुवेई प्रान्तको उहान सहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस यतिबेला दक्षिण एशिया हुँदै खाडी मुलुक, अफ्रिकी मुलुक हुँदै अहिले अमेरिकी र युरोपेली मुलुकहरुमा समेत फैलिसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का अनुसार अहिलेसम्म विश्वका ३० बढी देशहरुमा कारो...
मनोमानी रुपमा चल्ला र दानाको मूल्य निर्धारण : अतिरिक्त मूल्य असुल्न कृषकलाई दर बिनाको बिल access_timeफागुन ८, २०७६
काठमाडौं । पोल्ट्री व्यवसायीहरुले आफूअनुकुल मनोमानी रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न खाली बिल दिने गरेको प्रमाण भेटिएको छ । राजधानीमा कुखुरा व्यवसायीहरुको आन्दोलनकाबीच पोल्ट्री व्यवसायीहरुले कुखुरा पालक कृषकहरुलाई मूल्य निर्धारण नगरिएको बिल दिने गरेको प्रमाण भेटिएको हो । ...
सुनको धाराबाट सङ्लो पानी झरेन, ६ महिनामा १९ प्रतिशत मात्र विकास खर्च access_timeफागुन ७, २०७६
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट खर्चको विषयलाई लिएर चर्को बहस सुरु भएको छ । आर्थिक वर्षको आधा समय वितिसक्दा समेत सरकारले अपेक्षित विकास खर्च(पुँजीगत खर्च) गर्न नसकेपछि समस्या देखिएको हो । यसले मुलुकको आर्थिक संवृद्धिको लक्ष्यमा समेत पुरा नहुने देखिएको छ ।&...
कोरोनाभाइरसको साइड इफेक्ट : कामदार नफर्किंदा आयोजनाहरू प्रभावित access_timeमाघ २९, २०७६
काठमाडौँ । चीनमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको प्रकोपले ४५ दिन पूरा गरिसकेको छ । सो अवधिमा कोरोनाकै कारण एक हजारभन्दा बढी चिनियाँहरुको मृत्यु भइसकेको छ भने करिब ३० हजार चिनियाँ नागरिक उक्त रोगबाट प्रभावित छन् । यसले सिङ्गो चीन आक्रान्त छ । यो स...
एक हजारको सामान किन्दा १३ रुपैयाँ आफ्नै खातामा access_timeमाघ २८, २०७६
काठमाडौँ । अब देखि उपभोक्ताले सामान किन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) को १० प्रतिशतका रकम आफैले फिर्ता पाउने भएका छन् । यस्तो रकम उपभोक्ताले मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो वस्तुको मूल्य विद्युतीय उपकरण(ई–पेमेन्ट) मार्फत भुक्तानी गर्दा पाउने भए...
५० प्रतिशत सस्तोमा सेवा दिन्छु भन्दा पनि सरकारले रोक्यो, २० अर्ब रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानी मागियो: सीजी टेल access_timeमाघ २६, २०७६
काठमाडौं । नेपाल सरकार, दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेशन सेवा सञ्चालन अनुमतिका लागि अव्यवहारिक तथा गैरकानुनी रुपमा आफुलाई रोकेको सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालिले आरोप लगाएको छ । आइतबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले सबै नीति, नियम र प्रक्रिय...